Ihlomela ehlathini: Iyalolwa ezobhekiswa kubehluleli - Bayede News
Imigwaqo eyaqanjwa ngamabutho kaZulu KwaMashu
Umkhankaso ‘wokwembula izinqe’ abehluleli uyavuthwa. OlukaZuma noZondo luzoba semqoka kuwo
Kwake kwakhona inkolelo yokuthi izinkantolo kanjalo nabehluleli yizinto ezingesolwe noma sibukwe ngeso lepolitiki. Kwakuthi noma kukhona inhlokomo ngesinqumo esithile kepha osopolitiki bese bezithiba ukukhomba izinkantolo noma abehluleli ngomunwe. ENingizimu Afrika namuhla lokho sekuguqukile, njengoba sekukhona abalisho lime elokuthi isifundankantolo esithile sichemile noma umehluleli othile uhambisana noma uvikela izinhloso ezithile zepolitiki.
Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi esikhathini esingengakanani lokho okubizwa ngokuchema kwabehluleli ezinkantolo ezithize kuzoba yinto ekhulunywa obala. Ngokuthola koZul’azayithole umkhankaso wokuthi ‘abehluleli abathile bembulwe izinqe’ usuqalile kanti ukuzazelana okukhona phakathi kukaZuma noMehluleli uZondo kungase kufoloswe ngakho. Abakhulume naleli phephandaba banxusa ukuthi amagama angafakwa bathe ‘sesifikile isikhathi sokuthi kuvele amahlazo’ ngabezomthetho okucatshangwa ukuthi bangongcwelengcwele”, kusho omunye walaba okukhulunywe nabo.
Babe sebenza lokhu abathi wubufakazi balokhu abakholelwa kukho.
“Bheka nje lapha eSifundankantolo saseGauteg ngaphansi kukaMehluleli uMlambo kwake kwakhona isikhathi uma nje amaqembu aphikisayo ikakhulu abeDemocartic Alliance befuna ukuphikisa izinqumo zikaHulumeni babeya khona. Uma sebenze njalo wase wazi ukuthi umphumela uzovuma abaphikisayo. Uma ungakukholwa lokho hamba uyobheka uhlu lwamacala uHulumeni adliwa kuwona ngaphansi kwalesiya Sifundankantolo,” kusho omunye okukhulunywe naye.
Kuthiwa lo mkhankaso uzohlanganisa ukubhalwa kwemibono emaphephandabeni, izinkulumo ezizosatshalaliswa kwezokuxhumana, izethulo ezizokwenziwa lapho kuhlangene khona abantu njalo njalo.
Enza isethulo ngesikhathi amalungu ePhalamende enanela inkulumongqangi kaMengameli yangomhla zili-11 kuNhlolanja, umholi weqembu lesibili ngobukhulu kwaphikisayo, uMhlonishwa uMalema uthe ngabanye abehluleli kuleli:
“Singeke siqhubeke sizibe izinsolo ezikhulayo futhi ezikholekayo manje zokuthi amanye amalungu aqavile kwezobulungiswa ayakhokhelwa yizakhiwo zogombela kwesakhe zabelungu.”
Uqhubeke wathi “Abantu bazobavukela abehluleli asebengumthetho ngokwabo ababuye babe munye nosopolitiki. Nabehluleli nabo bangaphenywa. Abekho ngaphezu komthetho. Abezobulungiswa kufanele bazi ukuthi abawedluli uMthethosisekelo. Akukho okukhethekile okubanika amandla okucabanga ukuthi bangawuguqula uMthethosisekelo bese bethatha amalungelo abantu. Baziphikisa bona ekugwebeni kwabo ngoba becabanga ukuthi abathintwa bona.”
Inkulumo kaMalema yakamuva ilandela futhi ivumelana nekaZuma ayeyibhale mhla lu-1 kuNhlolanja lapho azifanisa nowayenguMengameli wePan Africanist Congress, uSolwazi uSobukwe.
Ngesikhathi sempilo yakhe, uSobukwe wayethathwa njengoyingozi uHulumeni weqembu laManeshinali owabe usushutheka “Isiqha SikaSobukwe” (Sobukwe Clause), umthetho owawubonakala kube ngathi unikeza ukusebenzisa amandla ngokubanzi, kodwa wawuqondene ngqo nokugunyaza ukwelula mbumbulu isigwebo sikaSobukwe. Lo mthetho wabe waziwa ngokuthi uMthetho Sichibiyelo Wemithetho Mvama uNombolo 37 we-1963 (General Laws Amendment Act 37 of 1963).
Lokhu kuzifanisa kukaZuma noSobukwe kunomlayezo othi uyakholwa ukuthi kuHulumeni waseNingizimu Afrika oholwa yi-African National Congress (ANC) kanye nakuzo izinkantolo kukhona abasemkhankasweni wokumenza isilo sengubo. UZuma akafihli ukuthi iKhomishini kaZondo kanye nezobulungiswa kuleli zinaye shaqa. Emuva kokuphuma kwesinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo nebivuma iKhomishini , uZuma uthe:
“Isinqumo sakamuva seNkantolo YoMthethosisekelo naso sifana nesimo seKhomishini ngokuthi manje naso sakhe izimo ezikhethekile futhi ezehlukile ezakhiwele ukubhekana ngqo noZuma.”
Uqhuebeke wathi: “Kuyacaca ukuthi imithetho yaleli lizwe inobupolitiki ngisho nasenkantolo ephezulu ezweni. Kamuva kuKhomishini Yokugwamandwa Kombuso, izinsolo ezibhekiswe kwezobulungiswa zithalalisiwe futhi zacindezelwa nguSihlalo luqobo lwakhe. Kubuye kucace ngokusobala kimi ukuthi kuphunywa nami iqhubu ukuba ngiphathwe ngokwehlukile nokuqondene nami ngabezobulungiswa kanye nohlelo lomthetho lonke.”
Akagcinanga lapho uZuma njengoba kwenye incwadi ayibhale mhla zili-15 kuNhlolanja uphinde wakhwela wadilika kubehluleli nathi bayamjijimeza. Lapha kule ncwadi uZuma uchaze ngokuthi akalwi nomthetho kepha ulwa nabathile:
“Yileyo ndlela yokuziphatha engilwa nayo hhayi umthetho noma uMthethosisekelo. Akusilona igunya leNkantolo YoMthethosisekelo engikuchithayo kodwa ukusetshenziswa kwawo kabi ngabehluleli abambalwa. Akusiwo umthetho wezwe engingawuhloniphi kodwa abehluleli abenza izinto ngokungekho emthethweni basuka ekusebenzeni ngokoMthethosisekelo bagijimele kwezepolitiki.”
“ … Ngenza kanjalo hhayi ngoba ngibukela phansi uMthethosisekelo noma umthetho, kodwa ngiveza ukungahambisani nalabo bobulungiswa asebefulathele umsebenzi wabo onqala emphakathini. Ngithatha lesi sinyathelo ngoba ngikholelwa ekutheni abehluleli akufanele basebenzele labo ababusayo emphakathini,” kusho uZuma.
Umkhonto ufakwa endodeni nasemfazini
Kuyo le ncwadi uZuma uveze ukuthi unombono wokuthi abehluleli abathile bavikela uMengameli we-African National Congress (ANC), uRamaphosa. Lokhu kuqinisekise into ebisivele ikhulunywa lapha phandle nethi kukhona ukungahoshelani phakathi kwala madoda womabili.
Kulokhu uMsholozi uthe: “Sihleli nabehluleli abasize uMengameli okhona manje ukuba acashele umphakathi ngokubukeka ngathi umkhonyovu owenzeka ukuze kunqotshwe ukhetho lwangaphakathi ku-ANC. Sihleli nabanye abehluleli abagimbicela lawo marekhodi (imibhalo) angaveza ukuthi abanye babo, ngesikhathi bephethe amacala ezinkantolo, izandla zabo zazifumbathiswe ukudayisa ngabathile.”
UMalema naye uphawulile walumbanisa inkohlakalo yabehluleli kanye noRamaphosa njengoba kwenze uZuma.
“Singeke saziziba izinsolo zokuthi abanye abehluleli bagwazelwe ngeProject Justice yakwaSSA, nangeminikelo yeCR17, okuyizinto ngisho noma ungazibuka kanjani ziwukukhohlakala, ukukhwabanisa, ukwamukelisana ngemali nokwakha amabhizinisi ngokukhohlakala,” kunaba uMalema.
Kubukeka umbiko wezinhloli nowenziwa isethulo kuKhomishini muva nje noqinisekisa ukuthi akuzona kuphela izintatheli ezabe zicosha amavenge esikhwameni sazo, kepha nabehluleli babebusa kuso. Okucacayo ngalokhu wukuthi kungahle kusetshenziswe imibiko eyehlukene yezinhloli ukuqhubeza imikhankaso ethile. Lokhu kuqinisekiswe yilo mthombo elaboHlanga ebelikhuluma nawo nonolwazi ngeqhingasu lokwembula abehluleli izinqe.
“UMafumadi wayethi ungcwaba abathile ngesikhathi ekuZondo kanti usiza thina. Manje izwe lizokwazi ukuthi nabezindaba kanjalo nabehluleli abekho msulwa. Kanti naye uMafumadi akekho msulwa. Bazame ukusefa umbiko wezinhloli bawenza uvumelane nazo besebenzisana nolunye uhlangothi kuzo izinhloli. Thina-ke sizoveza olunye uhlangothi kuyo imibiko yezinhloli. Kusazoshuba nguwafa wafa,” kusho lo mthombo.
Kuzo zonke lezi zinkulumo kubukeka kungahle kuqhamuke neminye imiqondo engahle yexwayise ngengozi yokungena kwezinkantolo odakeni lwezepolitiki yamaqembu nokuyinto engahle yehlise isithunzi nokwethenjwa kwezinkantolo.
Ozul azayithole Feb 19, 2021